Saddex dhaqan oo diciifiya difaaca jidhka • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
Saddex dhaqan oo diciifiya difaaca jidhka
Saynisku wax walba kamuu Sal gaadhin, xaqiiqooyinkii aanu haynay 1400 sanno ka hor ayuu maanta noo qiraa. Wixii ruuxda la xidhiidha wuu na daba socdaa. Ka fagow 3-ta dhaqan ee diciifiya difaaca jidhka.
Qofku markuu xaaraan cuno waxaa diciifa difaaciisa jidhka. Xaaraantu markay jidhka gasho ayuu jidhku bilaabaa inuu la dagaallamo. Dagaalkaas waxaa ka dhasha inuu awooddii jidhku diciifto. Halka xaaraantu diciifiso difaaca jidhka, xalaashu waxay xoojisaa difaaca jidhka.
Abuurkeenu waa xaq run ku dhisan, markasta oo qofku been sheego unugyada jidhka oo dhan ayaa la dagaallama. Dagaalkaas ayaa keena in qofka ay diciifto awooddiisa difaacu. Qofka beenta sheega garaaca wadnihiisu sarre ayuu u kacaa, maskaxdiisu khalad ayay u shaqaysaa, codkiisu wuu adkaadaa, kelyahu way balaadhan, debnuhu way gariiraan iyo qaar kale oo badan. Sida runtu awood u siiso jidhka ayay beentu u diciifisaa difaaca jidhka.
Shakigu sidiisa ayuu xanuun u yahay oo uu qofka u diciifiyaa awooddiisa ruuxeed, maskaxeed iyo jidheed.
Cabdiraxmaan Cismaan Jaamac